FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA BOUVIER DES FLANDRES - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Bouvier des Flandres
Bajor ilay Bouvier des Flandres mainty, sary natolotr'i Bajoron Kennels
Lisitry ny Bouvier des Flandres Mix Dogs
Alika omby Flanders
BOOV-eny andro FLAHN-druh
Ny Bouvier dia alika lehibe, matanjaka ary lava volo. Mifanaraka amin'ny vatana ny loha, manome ny alika mombamomba ny alika. Ny lamosina somary fohy dia somary fohy ny topline. Ny loha dia fisaka, lava kokoa noho ny sakany. Ny karan-doha dia mifanitsy amin'ny volomaso, izay malalaka eo anelanelan'ny sofina. Tapitra kely sy malalaka ary matanjaka ny vavahady. Mainty ny orona. Ny volomaso volomaso dia mahatonga ny fijanonana ho mazava kokoa noho ny tena izy. Mihaona ny nify amin'ny kaikitry ny hety. Ny maso mainty volontsôkôlà dia miendrika boribory lavalava miaraka amina maso mainty. Ny sofina telozoro dia avo dia avo, na voajanahary na avela voajanahary. Ny tongotra miverina hozatra tsara dia matanjaka ary ny tongotra eo anoloana dia mahitsy. Atao avo ny rambony ary miraikitra matetika. Naoty: tsy ara-dalàna ny mamboly na miantsona ny vatan'ny alika (rambo sy sofina) any amin'ny ankamaroan'ny faritra eropeana. Matetika esorina ny lalàm-panala. Ny palitao roa sosona dia mahatohitra toetr'andro miaraka amin'ny volon-doha maditra sy masiaka. Ny palitao dia tsara sy malefaka nefa matevina. Voakapa ny palitao ka manana volombava marevaka sy volombava ary volomaso, manome endrika hafa ny alika. Ny loko palitao dia tonga mainty, volondavenona, blonde, sira sy dipoavatra, volondavenona na brindle. Indraindray misy kintana fotsy kely eo amin'ny tratrany. Ny palitao mainty matevina dia tsy ankasitrahana amin'ny peratra fampisehoana, fa ekena ary ny palitao blonde dia tsy ekena. Ny tsipika Holandey dia matetika lehibe kokoa sy mavesatra noho ny tsipika Belza.
Ny Bouvier des Flandres dia alika mpankato izay mety ho toa mampatahotra, nefa raha ny marina dia malefaka sy malemy paika. Miaraka amin'ny habetsaky ny FANAZARAN-TENA hilamina ihany koa io. Mafana fo, tompon'andraikitra, maotona ary tsy matahotra mihitsy aza, mpiambina sy mpiambina tsara izy io izay mora zatra. Ity karazana ity dia mianatra haingana dia haingana, na dia tsy dia haingana loatra, ohatra ny Mpiandry Alemanina . Mitaky fiofanana voalanjalanja izy ireo ary mijanona ho voajanahary hatrany. Raha vao mianatra baiko iray izy ireo dia hahatadidy izany mandritra ny androm-piainany. Zava-dehibe ny fampahafantarana hatrany ny alika, tsy masiaka na masiaka, fa ianao no mety mijanona ho sefo . Mila tompona efa za-draharaha ity karazana ity mba hisorohana fahefana SY fiarovana loatra olana. Tokony ho izy ifaneraserana tsara, tsara kokoa manomboka amin'ny fahazazany mba hisorohana ny saro-kenatra, mampiahiahy ary famandrihana amin'ny olon-tsy fantatra. Ny fiarovana ny ankohonana rehefa misy ny loza dia tsy zavatra mila ampianarina, ary tsy zavatra azonao ampiofanina hiala amin'izy ireo. Hitsangana amin'ny alika ny alika raha ilaina izany. Alika fianakaviana tsara, tian'ny Bouvier ary tsara amin'ny ankizy. Ny Bouvier dia tena mahay mandanjalanja ary mandeha amin'ny asany mangina sy milamina. Malaza eran'izao tontolo izao ny tsy fivadihan'ity alika ity. Fiaran-dalamby fankatoavana ity karazany ity mbola kely. Ny fihetsik'izy ireo amin'ny ankapobeny sy amin'ny biby hafa dia miankina amin'ny fahafahan'ny tompony ho alfa amin'ny alika, mampita izay antenaina sy ny haavon'ny alika tsirairay. Raha omena azy ireo araka ny tokony ho izy ifaneraserana dieny mbola kely dia mety hisy ny fifanarahan'izy ireo saka SY biby hafa , nefa mitandrema biby fiompy tsy kaninina . Matetika izy ireo dia tsara amin'ny alika hafa raha toa ka notezaina niaraka tamin'ny alika kely. Ny olona mazoto kokoa dia mety ho mahery setra amin'ny alika raha tsy alfa no tompony ary tsia mifandray amin'ny alika tsy ilaina izany ady izany. Miadana ho matotra amin'ny saina sy ny vatana, maharitra 2-3 taona.
Haavony: Lehilahy 23 - 28 santimetatra (58 - 71 cm) Vehivavy 22 - 27 santimetatra (56 - 69 cm)
Milanja: Lehilahy 75 - 110 pounds (34 - 50 kg) Vavy 60 - 80 pounds (27 - 36 kg)
Mora voan'ny dysplasia hip, olana amin'ny maso toy ny katarakta. Ny Bouvier dia manana ambaratonga fanaintainana avo dia avo. Afaka mifandray be amin'ny tongotr'omby izy ireo nefa tsy mahatsapa izany. Tsy mahatonga azy ireo ho marary marary indrindra amin'ny veterinera izany, satria tsy azon'izy ireo fantarina hoe aiza ny alika no mandratra amin'ny alàlan'ny fanodikodinana ny tongotra sy / na ireo faritra amin'ny vatana hafa. Mirona mandalo lasantsy.
Ny Bouvier des Flandres dia hanao tsara ao amin'ny trano iray raha toa ka ampiasaina tsara. Tsy mihetsika izy io ao an-trano ary hahavita tsara indrindra amin'ny tokotany lehibe farafaharatsiny.
Ny Bouvier des Flandres dia alika mavitrika sy mavitrika izay manana fangatahana fanatanjahan-tena antonony. Mila miaraka aminao izany mandeha an-tongotra lava sy lava be isan'andro na mihazakazaka miaraka amin'ny bisikileta. Rehefa mandeha ity alika ity dia ataovy ambony voditongotra izy. Aza avela hivoaka eo alohany izy satria ny fihetsika voajanahary dia milaza amin'ny mpitarika kitapo alika mandeha aloha. Mandritra ny dingam-pitomboana, ny fanatanjahan-tena dia tokony fehezina tsara amin'ny diany ihany, mba tsy ho voageja mafy ny taolana, ny hozatra ary ny tonon-taolana. Ny alika dia mitaky ny heriny rehetra hananganana endriny matanjaka sy salama.
Ankizy 5 - 10, 8 eo ho eo
Mila fikarakarana be dia be. Borosio matetika ny akanjo lava ary sasao ny shampooing maina raha tsy ilaina izany. Ny Bouvier dia mila hamboarina farafahakeliny intelo isan-taona. Esory eo anelanelan'ny trims ny volo be loatra ao anaty sofina ary alaivo tsara eo anelanelan'ny lamban'ny tongotra ny volo. Aza avela hitombo lava loatra ny volo eo akaikin'ny tongotra handoko azy mba hanana tongotra tsara sy boribory ilay Bouvier. Bouvier voadio tsara dia mandany volo kely ao an-trano. Ny tompona Bouvier sasany dia nitory ny Bouvier fa tsara ho an'ireo marary allergy.
Tsy misy fifanarahana tena izy momba ny niandohan'ity karazana Franco-Belgian ity. Mety ho noforonina tamin'ny fiampitana ny Griffon sy ny Beauceron . Avy any Belzika ny karazan'olon-miasa izay tsy liana tamin'ny famoronana alika fampisehoana, fa kosa alika miasa. Ireo tantsaha, mpivaro-kena sy mpivarotra omby dia nampiasa ireo alika tamin'ny asany isan'andro. Na dia samy hafa habe sy endrika aza ireo alika dia mbola nitovy ihany ny nahafantarana azy ireo ho Bouvier. Bouvier des Flandres dia midika hoe 'omby avy any Flanders.' Nomena anarana anaram-bosotra maro koa ireo alika ireo, toy ny 'koehond' (midika hoe alika omby), 'Vuilbaard' (midika hoe volombava maloto) ary 'touchheur de boeuf' na 'pic' (midika hoe mpamily omby). Taty aoriana dia nampiasaina ho mpitondra hafatra sy mpamonjy alika izy ireo nandritra ny Ady lehibe I. Toy ny ankamaroan'ny razana nandritra ny ady lehibe, saika novonoina ny Bouvier. Tamin'ny taona 1923, nisy vondron'olona niasa tamin'ny famoronana indray ny karazany Bouvier ary nisy klioban'ny fiompiana natsangana tany Belzika. Ny sasany amin'ireo talenta Bouvier dia mpiambina, mpiambina, alika mpanara-dia, mpitari-dalana ho an'ny jamba, mikaroka sy mamonjy, asan'ny polisy, asa miaramila, saritaka, mailaka, fankatoavana mifaninana ary Schutzhund.
Diesel Bouvier blond— 'Noraisiko ity sarin'ny BdF lahy 4-1 / 2 taona ahy ity. Diesel no anarany ary izy no zazalahy mamy indrindra - bera teddy tena izy. Alika milamina tokoa izy nefa tsy misalasala miaro antsika raha mahatsapa fandrahonana izy. Tiany ireo ‘rahavaviny’, vehivavy Terrier Aostralianina ary vehivavy Poodle kely (iza no sefo ary tsara izany miaraka amin'i Diesel). TSY tiany ny saka. Ny zavatra tian'i Diesel atao dia ny milomano any an-dranomasina, mihazakazaka eny amoron-dranomasina, ary milalao 'manenjika' ao an-tokotaninay (izaho no mpanenjika azy no manenjika). Tiany koa ny misolelaka ambony fandriana miaraka aminay ary manandrana mandray efitrano kely araka izay tratra. aho mandehana Diesel isan'andro adiny iray farafahakeliny - lava kokoa amin'ny faran'ny herinandro rehefa mankafy fitsangatsanganana an-tongotra mandritra ny adiny 2 any an-tendrombohitra izy. Nifamatotra tamiko manokana (neny) izy fa tiany daholo, anisan'izany ny ankizy. Mila a tsara combing -tsy farafaharatsiny isaky ny andro hafa. Ny azy ihany no zavatra ratsy momba azy kibo . Eny, zazalahy gasikara BE izy (noho izany ny anarany) ary afaka manadio efitrano afaka fotoana fohy. Heveriko fa tokony ho fantatry ny olona izany alohan'ny hividianana BdF satria zavatra iraisana amin'ity karazany ity izany. TENA mila tia ny alikanao ianao mba hiaretany ny maimbo! '
Molly ilay Bouvier des Flandres puppy amin'ny 17 herinandro
'Willow ilay alika kely Bouvier amin'ny 14 herinandro dia efa eo am-piofanana ho alika fitsaboana / hakingana. Oh, ary izy no alika kely indrindra eto amin'izao tontolo izao. Zahao izy! '
'Zanako kely Bouvier des Flandres antsoina hoe Windmolen's Indigo Blue aho, fa antsoin'ny olona hoe Blue fotsiny aho.' Sary natolotry ny Windmolen Bouviers
'Dixie dia brindle volafotsy Bouvier des Flandres amin'ny 30 santimetatra ary 125 kilao ny refy amin'ny 9 taona. Mbola tsy nahita na nanana alika tony sy maotina toa an'ity zazavavy ity aho. Fahafinaretana miaraka amin'ny ankizy, alika hafa ary biby fiompy izy, na izany aza, saka sy biby mpikiky izay tadiaviny ho an'ny sakafo kulinarety ihany! Tena miaro trano sy trano izy, nefa alika modely azo ianteherana rehefa eny imasom-bahoaka amin'ny orinasam-pianakaviana. Kely no nalehany, saingy mitaky fitandremana be ny palitao satria mats tsy tapaka ary toa an'i Velcro maka ny zava-drehetra! Izy dia tena manan-tsaina, tena entin'ny haza, mahery sy mafy loha izay mahatonga an'i Bouviers ho alika mifanaraka amin'ny mpikarakara za-draharaha. Ity ilay alika tsy miraharaha izay anaovany na izay alehany raha mbola eo anilako izy. Miaina ny fiainam-piainana amin'ny fahafinaretana tanteraka izy ary manao ny rahavaviny King Shepherd rahavaviny toa ny Lady of the Manor! '
Heeler manga 8 herinandro
Nani the blonde Bouvier blonde Bouviers dia teraka maizina ary mihamazava hatrany ambany hatrany rehefa mihalehibe izy ireo.
Paden the Bouvier, an'i George sy Frances Roach, The Bytown Obedience Club
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Bouvier des Flandres
mpiandry alemanina mpanjaka volo fohy
boston terrier miniature schnauzer mix
Mpamadika manga 6 volana
silky terrier sy Chihuahua Mix